မြန်မာ-အမေရိကား ရွှေလမ်းငွေလမ်းဖေါက်ပြီးနောက်ဝယ်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » မြန်မာ-အမေရိကား ရွှေလမ်းငွေလမ်းဖေါက်ပြီးနောက်ဝယ်….
Posted by maungmoenyo on Nov 20, 2012 in Politics, Issues | 24 comments
(၂၀၁၄) မြန်မာကအာဆီယံ ဥက္ကဌရာထူးရယူချိန်မှ လာရောက်မယ်လို့တွက်ဆကြသူတွေအားလုံးကို အံ့အားသင့်စေမဲ့ အမေရိကားပြည်ထောင်စုသမ္မတအိုဘားမားရဲ့ ပထမဆုံးမြန်မာခရီးစဉ်ဟာ တိုတောင်းလှပေမဲ့ နှစ်နိုင်ငံ ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အမှန်တကယ်ဘဲမြန်ဆန်သွားစေပါတယ်။ သေချာတာကတော့ မြန်မာနဲ့ geopolitics အရ ရော၊ စစ်ရေးနိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှုမှာ ကနဦးလမ်းခင်းပြီးဖြစ်တဲ့ အင်အားကြီး တရုတ်နဲ့ ရုရှ နိုင်ငံများကတော့ မျက်စေ့ဒေါက်ထောက်ကြည့်နေမယ်ဆိုတာမလွဲပါဘူး။ ဒုတိယသက်တမ်းရဲ့ ကနဥိးပြည်ပခြေလှမ်းလည်းဖြစ်၊ နကိုကတည်းက နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာ အာဏာရှင်စနစ်ကိုတည်ငြိမ်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့လျင်မြန်စွာအသွင်ကူးပြောင်းယူနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလည်း၊ ကွင်းဆင်းလေ့လာချင်တဲ့ အာသီသရှိတာကြောင့်လည်းပါလိမ့်မယ် လို့ယူဆရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ငံတကာကသြချရလောက်တဲ့ ကြိုတင်မဲပေးစနစ်ဘုံးဘောလအောနဲ့ တက်လာတဲ့အစိုးရမို့ အများက ရစရာမရှိအောင်ဝိုင်းဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတဲ့ အခြေအနေအသိုက်အမြုံကနေ၊ ပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရမို့ ဒိလောက်ကြီးမြန်ဆန်မဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရှိလာလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူကမမှမထင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒေသတွင်းအာဆီံယံနိုင်ငံများသာမက၊ အနောက်နိုင်ငံများကပါ အံ့သြလောက်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တွေကိုဇောက်ချလုပ်လာတဲ့ သမ္မတဥိးသိန်းစိန်ရဲ့ ခြေလှမ်းများဟာ၊ နိုင်ငံတကာကအာရုံစိုက်လာစေတဲ့အဓိကအချက်ကြီးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို အမေရိက ကစံနမူပြု ခိုင်းနှိုင်းစရာအဖြစ် အာဏာရှင်စနစ်ကြီးစိုးတဲ့ နိုင်ငံအချို့ကို လက်ညှိုးထိုးပြောဆိုလာရလောက်အောင်အထ်ိဖြစ်လာတဲ့အတွက်၊ အရင်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးအားနည်းချက်ကို အသံသေးအသံကြောင်နဲ့အကျိုးလိုသလိုနဲ့ ၀ိုင်းတွန်းကြတဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေတောင်၊ ခုချိန် နှုတ်ဆိတ်နေရပါပြီ။ ဒီလိုပြုပြင်မှုတွေလုပ်နိုင်ရခြင်းရဲ့အဓိကမောင်းနှင်အားကတော့၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှာ မူလကပါဝင်တဲ့ ခေတ်ဟောင်း အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကို ပညာတတ် technocrats တွေနဲ့အစားထိုးနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့သုံးသပ်မိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးထားမှု ဟာ ဒုတိယမောင်းနှင်အားဖြစ်သလို၊ ပြည်သူ့ရင်ထဲကခံစားချက်နဲ့စည်းချက်ညီညီ လိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်လဲပါပါတယ်။ ပြည်သူကလိုလားတဲ့ အဓိကအတိုက်အခံတွေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလူသိရှင်ကြား နေရာပေးလာရုံမက၊ နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေးမှာ ပဓါနကျတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ (principle organizations) တွေနဲ့ လက်တွေ့ကျကျ ထိတွေ့ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူထုရဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှု၊ လူထုကြားနှစ်ပရိစ္ဆေဒကြာကိန်းအောင်းနေတဲ့ အစိုင်အခဲကိုအတော်ပြေလည်သွားစေတာတွေလည်းပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရက လူထုရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒကိုဖြည့်တဲ့အချိန်မှာ လူ့အခွင့်အရေး၊ နိုင့်ထက်ပြုကျင့်မှုတွေကို လုံးဝလက်မခံတဲ့ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ချိန်ထိုးချိန်မှာ၊ နိုင်ငံတကာရဲ့ စံနှုန်းကိုလိုက်နာဘို့ကြိုးစားကြရစမြဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသိပြုရပါမယ်။ယာယီအနေနဲ့ လူထုရဲ့လိုအင်ကိုလိုက်လျောရပေမဲ့ တဖက်က ဖိအားပေးလာတဲ့ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆီရေးဟာ မဖြစ်မနေလိုအပ်လာပါတယ်။ ဒါဟာလည်းတကယ်တော့ လူထုအတွက်ရေရှေအကျိုးကိုမျှော်ကိုးတဲ့သဘောထားဖြစ်ပါတယ်။ Edison Research ရဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ ကိန်းဂဏန်းများအရ သမ္မတအိုဘားမားအောင်နိုင်ရေးအတွက် အဓိကအင်အားစုကတော့ minority တွေဖြစ်တဲ့ African-Americans, Asian American နဲ့Latinos တွေဖြစ်တာမို့၊ Asian တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အမေရိကနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာပဓါနကျတဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီလို့ဆိုရပါမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ Asian-America (၇၃%) က သမ္မတအိုဘားမားကိုထောက်ခံမဲ့ပေးထားတယ်လို့ စာရင်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ Latinos တွေရဲ့ထောက်ခံမဲ့ (၇၁%) ကိုသာလွန်သွားပြီလို့ဆိုရပါမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်တဲ့ညက သမ္မတကိုယ်တိုင်သူ့ကိုနေ့ညမအားလုပ်အားပေးမဲဆွဲခဲ့ကြတဲ့သူတွေဆီခနရောက်ချိန်မှာမျက်ရေမဆည်နိုင် အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသလို၊ Asian တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာ အမေရိကရဲ့အနာဂါတ်ကို ပုံဖေါ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မဲ့ အင်အားစုအဖြစ်ရွေးကော်ကပွမြဲဆွယ်စဉ်ကာလကတည်းက အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီမိုကရေစီထွန်းသစ်စမြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် ရျေ့ဖျားအာရှနိုင်ငံတွေဖက်ခြေဆန့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပုံရပါတယ်။ အမေရိကသမ္မတတစ်ဦးရဲ့ပြည်ပခရိးစဉ်တိုင်းဟာလုံခြုံးရေးအစီအမံတွေ အကြီးအကျယ်လုပ်ရတာမို့၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းမှာ လများစွာကတည်းကကြိုတင်ရောက်ရှိနေကြတဲ့၊ အမေရိကန်တွေအတွက်စီမံခွင့်ကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရတဲ့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့လည်း လိုက်လျောမှုတွေကို အတော်ကြီးပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ (၁၉၆၂) ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အနောက်နိုင်ငံများနဲ့ အမေရိကရဲ့ပြည်တွင်းရေးပါဝင်ပါတ်သက်လာမှုကို၊ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ခဲ့တဲ့ အရင်မြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ သဘောထားကိုဆန့်ကျင်ပြီး၊ ဒီလိုလိုက်လျောမှုတွေပြုလာရခြင်းဟာလည်းနိုင်ငံ တိုးတက်ထွန်းကားမှု။ သန်း(၆၀)သောပြည်သူတွေဘ၀အဆင့်မြင့်မားမှုကို အမှန်တကယ်လိုလားတဲ့ သမ္မတဥိးသိန်းစိန်ရဲ့ သဘောထားဘဲဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်။ သူ့အစိုးရနဲ့သူ့အသိုင်းအ၀န်းကြာ်းမှာဒီလိုလမ်းဖွင့်ပေးမှုတွေကိုယဉ်ပါးခြင်းမရှိသေးတာတော့သေချာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုရှိနေမဲ့သူတွေကိုရအောင်စည်းရုံနိုင်ခြင်းဟာ၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့ ဗျူဟာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ အာဆီယံကိုမြန်မာကလိုအပ်တာထက်၊ အာဆီယံကမြန်မာကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာ၊ ယခင်ကစကားအဖြစ်ဇွတ်မှိတ်ပြောတဲ့ဘ၀ကနေ၊ ခုအချိန်လက်တွေ့အရာထင်လာတဲ့အဖြစ်ရောက်နေပါပြီ။ ဒေသတွင်း နိုင်ငံရေးချိန်ခွင်ရှာပြောင်းလဲမှုမှာထင်ရှားလာပါပြီ။ အရင်က အမေရိကအပါအ၀င်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးမှာ (စစ်ရေး နိုင်ငံရေးအပါအ၀င်) ကြားခံ နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ စင်္ကာံပူ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်းဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေလိုအပ်ပေမဲ့ခုချိန်မှာ၊ သူတို့ရဲ့ကူညီမှုတွေလိုအပ်တော့မယ်မထင်ပါဘူး။ မဟာအာရှနိုင်ငံသွေးစည်းညိညွတ်ရေးဗျူဟာအခင်းအကျင်းမှာ၊ မလွဲအရှောင်သာရင်ဆိုင်ရမဲ့ တရုတ် နဲ့ ရုရှတို့ရဲ့၊ ၀င်ရောက်ချယ်လှယ်လိုမှုအလားအလာဟာ (၂၁)ရာစုမှာအတော်နည်းပါးလာပါပြီ။ သာဓကအနေနဲ့ စင်္ကာံပူ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်းဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့နမူနာကိုကြည့်ရင် အဓ်ိကဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်စီးပွားရေးမူဝါဒတသားထဲကျရေး အစီအမံများကိုသာ စနစ်တကျဖန်တီးထားတတ်ဖို့ဘဲလိုပါတယ်။ဆိုလိုတာက ပူးပေါင်းဈေးကွက်တွေကိုသာ အကျအနဖန်တီးထားပေးဘို့ဘဲလိုအပ်ပါတယ်။ Cobra Gold ထဲပါဝင်လာရေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စတင်လေ့လာနေတာကခုမှမဟုတ်ဘဲ၊ ယခင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသိန်းရွှေလက်ထက်၊ ကတည်းကရှိပြီးသားမို့၊ ခုမှကတိုက်ကရိုက်လုပ်ရတော့မဲ့ကိစ္စမဟတ်ုပါဘူး။ စစ်ရေးခြေလှမ်းသစ်လှမ်းရာမှာ မိမိနိုင်ငံတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုထိခိုက်မဲ့ ခြေလှမ်းများကိုသာသတိထားဘို့နဲ့၊ နိုင်ငံတကာနဲ့အထူးသဖြင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကစစ်ရေးပူးပေါင်းမှုကိုမှားယွင်းစွာအဓိပ္ပါယ်မဖွင့်မိစေဘို့သာ အရေးကြီးပါတယ်။
အမှန်ပြောရရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမျက်နှာစာကိုဖွင့်ပေးတဲ့ အာဏာရှိအမေရိကသမ္မတတစ်ဥိးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မြောက်ရေးဟာ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အားတက်သရော်အားပေးမှု နဲ့ သမ္မတဥိးသိန်းစိန်ရဲ့ ထူးခြားမက်မောလောက်စရာကောင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးကိုင်တွယ်မှုတွေကြောင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအခြေစိုက်ရုံးထိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ အမေရိကသံရုံးဟာ၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာကရှိခဲ့တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ လူမှုရေးဖလှယ်ရေးသာမာန် တာဝန်ခံသံမှူးအဆင့်ကနေ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေး ကဏ္ဍတွေအပါအ၀င်၊ အသွင်းကူးပြောင်းထူထောင်ေ၇းလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပါတ်သက်လာတော့မယ့်သံအမတ်ကြီးအဆင့်ရောက်နေပြီ၊ ဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိမူမိကြဘို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာ အမေရိက လို့ခေါ်တဲ့ Uncle Sam ရဲ့ နိုင်ငံခြားလုပ်နည်းဗျူဟာပါဘဲ။ ဒါကို active engagement လို့ဆိုထားတာကြောင့်ဒီအပေါ်မှာ၊ ပြည်သူအများယုံထင်ကြောင်ထင်မဖြစ်ကြဘို့ကလည်းသိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ အမေရိကအစိုးရဟာ ကျန်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးနဲ့ကွာခြားတဲ့အချက်က democracy ကို democracy တရပ်အနေနဲ့ ရာနှုန်းပြည့်သုံးစွဲခြင်းပါဘဲ။ ဆိုလိုတာက မြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ယဉ်ပါးခဲ့တဲ့ socialist-democracy ဒီမိုကရေစီဗဟိုဥိးစီးစနစ်ဆိုတဲ့ ဒွေးရောယှက်တင်မှုအလျင်းမရှိပါဘူး။ democracy ကိုရိုးရိုးစင်းစင်းဘဲမြင်ပါတယ်။ သမ္မတဟာ ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကိုဖေါ်ထုတ်ရာမှာ ကမ္ဘာမှာအာဏာအရှိဆုံးသူတယောက်ဖြစ်သလို၊ ကမ္ဘာမှာအာဏာအမဲ့ဆုံးသူတယောက်လည်းဖြစ်ကြောင်း၊ သမ္မတ ဂျရယ်လ်ဖိုဒ်က အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာမှာ မိမိကျင့်သုံးတဲ့democracy ကျင့်စဉ်ကို မူရင်းအတိုင်းကိုင်စွဲကျင့်ခဲ့လို့ မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ -အီရတ်နိုင်ငံရေးကိစ္စမှာစစ်ရေးနည်းလမ်းအရ ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ချမျတ်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေ၊ ခုထိအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာခံစားနေရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့လည်း မိမိနိုင်ငံရေမြေသဘာဝနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ democracy နည်းလမ်းတွေကို လမ်းကြောင်းချပြီးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့၊ ဆန်းသစ်တဲ့အယူဝါဒကိုမက်မောတတ်တဲ့လူသားတို့ရဲ့ သဘာဝကို၊ သတိတရားလက်ကိုင်ထားပြီးရှောင်ရှားသွားကြရပါမယ်။
သမ္မတရဲ့ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ရေး လမ်းကြောင်းတည့်မတ်ပြီးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဟာ လူထုရဲ့ ပါဝင်ပူးပေါင်းမှုအပေါ်မှာများစွာမူတည်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေးဝိ၀ါးကွဲပြားမှုတွေက အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုတိမ်စောင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလဲသတိထားကြဘို့လိုပါတယ်။ Uncle Sam ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့တတ်ကျွမ်းမှူဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့လျင်မြန်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာ တို့ဟာ ဟန်ချက်ညီညာစည်းချက်ကျဘို့နဲ့ နှစ်နိုင်ငံအကြီးအကဲများရဲ့ အပြန်အလှန်နားလည်မှု၊ အရှည်ကိုကြည့်တတ်မှုတို့အပေါ်များစွာမူတည်နေပါပြီ။
အလယ်ကျော်လောက်က ရေးတဲ့ ယခင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသိန်းရွှေလက်ထက် ဆိုရာမှာ
ဦးသန်းရွှေကို နာမည်များ မှားသလား လို့ 
ကျန်တာတော့ ဗဟုသုတအဖြစ် ဖတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျ
ဗိုလ်ချုပ်သိန်းရွှေဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေရဲ့ အမွှာညီဖြစ်ပါတယ်..။ သူတို့မှာ အမွှာညီအကို နှစ်ယောက်ရှိတာ လူသိအတော်နည်းလို့ တဖက်လှည့်နဲ့ အသိပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါမယ်။ ဒါလည်း စာရေးခြင်းအတတ်ပညာ တခုပါပဲ။ မဟုတ်တော့လည်း မဟုတ်လို့ ငြင်းနိုင်သလို ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ်လေလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ကန်-မြန် ဆက်ရေးဆံမှာတော့ ဘွားဒေါ်ဂျီးနဲ့အဖွဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားအတွင်း ရောက်မလာသ၍ ထုနဲ့ထည်နဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရောက်မလာနိုင်သေး သုံးသပ်ပါတယ်။ စစ်တပ်ဖက်က အာဏာကို သမတ၊ လွှတ်ကထနဲ့ ကာချုပ်ဆိုပြီး သုံးပိုင်းချုပ်ထားသလို အတိုက်အခံဖက်ကလည်း ဘွားဒေါ်ဂျီးတယောက်ထဲ ပုံအောမထားဘဲ အနည်းဆုံးတော့ သူတို့နဲ့ အင်အားညီအောင် ဘွားဒေါ်၊ ၈၈နဲ့ မဟာမိတ် လူနည်းစုအဖွဲ့များစိုပြီး ပြန်ဆိုင်ထားသင့်တယ်။ အမှန်တကယ်တော့ တကဲ့ကင်းမိတ်ကာ ဦးသန်းရွှေနောက်မှာ ရှိနေသေးလို့ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘွားဒေါ်ကို ခေါင်ထိပ်ရောက်အောင် ပို့ထားပြီး ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ+တိုင်းရင်းသား မြေပေါ်မဟာမိတ်များ၊ လူဂျီးဗိုင်း၊ ဦးရွှေမန်းနဲ့ ၈၈အဖွဲ့၊ ကာချုပ်နဲ့ မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်တပ်များ ဦးဆိုင်ထားပေးသင့်တယ်။ နောက်ဆုံး ကစားကွက်ကို ဘွားဒေါ်နဲ့ဦးသန်းရွှေ ရွှေ့ကြပစေပေါ့။ အခုတော့ ဖြစ်နေပုံက ဦးသန်းရွှေနဲ့ အမေရိကန် ဆိုင်ထားတယ်၊ ဘွားဒေါ် တဆင့်အောက်ကျနေတယ်။ သို့ပေသိ အမေရိကန်က ဒေါ်စုကို ဗဟိုပြုရကောင်းမှန်း သိသ၍ ပြသနာမရှိနိုင်ပါ…..။
ဦးကြောင်ရော အမြွှာမရှိဘူးလား အဲဒါလေးသိချင်လို့
ဗိုလ်သိန်းရွှေဟာ အမွှာမဟုတ်သလို၊ ဒါဟာလည်းစာရေးခြင်းအတတ်ပညာမဟုတ်တာတော့သေခြာပါတယ်။ ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်ပြောရအောင်ကလည်းအမှားကအထင်းသားကလား။ ဒေါ်စုရဲ့ လက်ရှိပါဝင်မှုဟာ၊ လွှတ်တော်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်မှန်ကန်လာဘို့နဲ့၊ အရည်အသွေးမြင့်မားလာဘို့လိုပါတယ်။ ညှာညှာတာတာဝေဖန်ရရင်၊ လက်ရှိလွှတ်တော်(၂)ရပ်ဟာ ဝေလေလေအဆင့်အဆင့်ကမတက်သေးပါဘူး။ ဆိုးတာက စစ်အစိုးရလက်ထက် ကအသွင်းကူးပြောင်းပါဝင်လာတဲ့ အငြိမ်းစားဝန်ကြီးဝန်ကလေးမင်းများရဲ့ ဥပဒေပြုခြင်းကဏ္ဍ နဲ့ အုပ်ချုပ်ခြင်းကဏ္ဍကို အတင်းရောချသုံးစွဲဘို့ကြိုးစားနေခြင်းက အတော်ဆိုးပါတယ်။ လွှတ်တော်ရဲ့ကဏ္ဍပီပြင်လာတာနဲ့အမျှ ဒေါ်စုရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ အဓိပ္ပါယ်ရှိလာမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ လက်ရှီလည်းNLD နဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက အမတ်တွေကိုအပြိုင်ပြည်ပလွှတ်ပြီး လေ့လာရေးအမည်ခံ လက်ပူတိုက် ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်း ကိစ္စတွေဇောက်ချလုပ်နေကြကြောင်းကြားနေရပါတယ်။
လက်ရှိစစ်တပ်ရဲ့ ကဏ္ဍ ——- demilitarization (ဒါမှမဟုတ်) အဆင့်မြင့်သော ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အဖြစ် အသွင်မပြောင်းမနေပြောင်းလိမ့်မယ်လို အပြည့်အ၀ယုံကြည်ကြောင်းပါ။ (ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရှိလာတာနဲ့အမျှပေါ့လေ။)
(၂၀၁၄) မြန်မာကအာဆီယံ ဥက္ကဌရာထူးရယူချိန်မှ လာရောက်မယ်လို့တွက်ဆကြသူတွေအားလုံးကို
ဆိုတော့ နောင် ၂နှစ်အကြာမှာ နောက်တခေါက် ထပ်လာ ဖို့ မျှော်နိုင်တာပေါ့နော်..။
မြန်မာနိုင်ငံ မင်္ဂလာပါ .. အစချီလို့
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က ကျနော် ဒီနေရာမှာ blah blah blah.. ပေါ့ဗျာ …
ဘာတွေ ပိုကောင်းသွားပါပြီ ဘာတွေအားရစရာကောင်းပါတယ်။ ဘယ်အပိုင်း ပိုမို အားဖြည့်ကြမယ်
ဒါမျိုးတွေ ကြားရဖို့ ပိုရင်ခုန် နေရပြီ လား မပြောတတ်ပါ..။
၂၀၁၄မှာ တခေါက်လာဖြစ်ရင်တော့ ၂၀၁၅ မှာကမယ့် ဇာတ်တော်ကြီး ..အဲအဲ ..ရွေးကောက်ပွဲအတွက်
အားရှိစရာ မျှော်လင့်နိုင်မလား ဆိုတာလေးရော…
ခုတော့ ဟော့ တယ် ။.. ဟော့တယ်… အရမ်းအရမ်း …ဟော့တယ်..
Be like Burma. (Obama)
Inz@ghi ရဲ့ ကွင်မင့်ကြိုက်သဗျို.။ “အရမ်း..အရမ်း ကို…ဟော့လာတာဘဲ” ဆိုတာ….။ အစိုးရအဖွဲံအပါတ်စဉ်အစည်းအဝေးတွေမှာ ဟော့တာလေးတွေထဲ..ဒီဟော့တဲ့ကိစ္စက..ပိုသာလိမ့်မယ်လေ။ ခုချိန်လာရောက်ခြင်းကတော့ စကားတန်ဆာဆင်မှုပေါင်းထောင်သောင်းချီတဲ့ ဖွင့်ပွအြခန်ူအနားပေါ့ဗျာ..။ နောင် အာဆီယံဥက္ကဌဖြစ်ချိန်မှာ လာရင်တော့ အလုပ်သဘောသက်သက်လာတဲ့ ခရီးစဉ်ဖြစ်လာနိုင်သလို၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်ရှိနေမဲ့အနေအထား ပေါ်များစွာတည်နေပါတယ်။ (၂၀၁၅) ရွေးကောက်ပွဲ ဟာ (၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ဆိုးမွေတွေကို လက်ရျိအစိုးရနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို သင်္ခန်းစာကောင်းကောင်းကြီးပေးနေသလို အတိပ်ကအရိပ်လိုအမြဲချောက်နေမှာမို့၊ လွတ်လပ်၍တရားမျှတသော ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရတွေလွှမ်းမိုးနေမယ်လို့ မျှော်လင်ကြောင်းပါ။ အဲ….ကြံ့ဖွံ့ (၀ါ) ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီရြ့အနာဂါတ်ကတော့… မစဉ်းစားတတ်အောင်ပါဘဲ။
လူထုရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုလို့ ပြောရပါအုန်းမယ်။
ခုတလော အမြတ်ခွန်တွေ ရေရေလည်လည် ပြသာနာရှာနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအခွန်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင် အထက်ကအဖွဲ့စည်းတွေကိုယ်တိုင် အောက်ခြေထိ ဆင်းပြီး ကိုင်တွယ်စေချင်ပါတယ်။
ခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ ဆိုတော့ ဘာမှ မသိနားမလည်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင် တွေ တော်တော်များများ ( အလယ်လတ်သမား အသေးစား အားလုံးနီးပါး ) ရှိနေသေးပါတယ်။ သူတို့ဆီကို အစိုးရရဲ့ အခွန်ကောက်ပုံကောက်နည်းတွေကို ကောက်တဲ့ နှုန်းတွေကို စာနဲ့ အရင်ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဘာကြောင့် အခွန်ကောက်ရတယ် အခွန်ဆောင်လို့ရတဲ့ ပိုက်ဆံကို အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူကို ဘယ်လို အကျိုးပြုမယ်ဆိုတာကြောင့် ဆောင်သင့်တဲ့ အကြောင်းလေးရော ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရလေး အကြောင်းကိုပါ သေချာသိအောင် စာတွေ ပို့ပေးစေချင်ပါတယ် ။ လုပ်ငန်းတိုင်းဆီကိုပါ။
ခုတော့ ရုံးက လူတွေက အိမ်တွေ ထိ လိုက်လာပြီး ရုံးခန်းဝင်စစ်ချင်တယ်တို့ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုဝင်ငွေရှိတယ် ဆိုတာ ကျုပ်တို့ သိပြီးသားတို့ စတဲ့ စတဲ့ အပြောမျိုးတွေနဲ့ အနုကြမ်းဝင်စီးနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလို လုပ်ခွင့်ရှိမရှိလည်း သိချင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး အခွန်ဥပဒေဟာ ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကနေ ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ထိ ဘယ်လို သက်ဝင်တယ် ဘယ်လိုတွေ ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီဆိုတာကိုလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာအောင် ကြေငြာပေးပါ။ လက်ကမ်းစာအုပ်တွေ ဝေပေးပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ မြေခွန် ၊ ရေခွန် ၊ မီးခွန် ၊ ကုန်သွယ်ခွန် ၊ အမြတ်ခွန် ၊ ၀င်ငွေခွန် စတဲ့ စတဲ့ ရှိသမျှ အခွန်တွေရယ် ဆောင်ပုံဆောင်နည်းက စပြီး ဘယ်လိုလူတွေကို လျှော့ပေါ့ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာအထိ ကကြီးကနေ အအထိ ပါတဲ့ ဟာကို လူတိုင်း လူတိုင်း သိနားလည်လာအောင် လက်ကမ်းတွေ ရိုက်ပြီး ဝေသင့် ပို့သင့်ပါတယ်။
ခုတော့ အခွန်ရုံးက လူတွေက သူတို့ခေတ်ရောက်လာပြီလို့ ထင်နေပုံရပါတယ်။ မြေကွက်ဈေးညှိတာ တို့ အမြတ်ခွန်တို့ ဟာ သူတို့လက်ထဲ ရှိတာမို့ သူတို့ ကို ဈေးညှိခိုင်းပါတယ်။ သူတို့တောင်းသလောက်မပေးရင် ခြိမ်းခြောက်ကြပါတယ်။ နားမလည်တော့ လူတွေက ကြောက်ကြတယ် တောင်းသလောက်ပေးကြတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ လူတွေကို ပုလိပ်စစ်စစ်သလို လုပ်ပြီး ငွေညှစ်တတ်ပါတယ်။ အခုတော်တော်လေးကို ဆိုးနေတာပါ။ မသေခင် ရိက္ခာယူတာလား အသစ်ရောက်တဲ့သူတွေက ဆိုးနေသလားပဲ ။
နောက်ပြီး သူတို့ တောင်းသလောက်မပေးရင် ဘယ်ဈေးနဲ့ ဖြစ်ပစ်လိုက်ရမလား ဆိုတဲ့ အပြောဆိုတွေ အလွန်စက်ဆုတ်ရွံ့ရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့ မျက်နှာတွေနဲ့ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတောင်းနေကြလို့ပါ။ ကိုယ်တွေ့သိသလောက် မန္တလေး ပုသိမ်ကြီး အမြတ်ခွန်ရုံးက အဆိုးဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ အခုလက်ရှိ ဦးမြ၀င်းဆိုတဲ့ သူက အဆိုးဆုံးပါ။
ပြည်သူတွေ အနေနဲ့လည်း နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ ဆောင်လိုက်တဲ့ ငွေတွေဟာ သူတို့အတွက် ဘယ်လိုအကျိုးရှိနိုင်မယ် ဆိုတာ သိရင် ဆောင် ဖို့ ၀န်လေးကြမယ် မထင်ပါဘူး။ ခုတော့ အေးဓားမြတွေနဲ့တွေ့နေကြပါတယ်။
နိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေထဲမှာ ဒီအခွန်ဂဏ္ဍကလည်း အရေးကြီးလာတာမို့ ပါ။ ခရိုနီ အကြီးစားတွေနဲ့ သာမန် လူလတ်တန်းစား လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ ၀င်ငွေတွေဟာ မတူပါဘူး။ အခက်ခဲတွေ လုပ်ငန်း ကောင်းတလှည့်မကောင်းတလှည့်ဆိုတာလေးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
အားလုံးကို တန်းတူညီမျှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေချင်တာပါ။
လူထုကို ပူးပေါင်းပါဝင်စေချင်ရင် အခွန်မှ မဟုတ် ကိစ္စတိုင်းကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ထင်သာမြင်သာရှိအောင် လုပ်ပြီး လူထုကို သိအောင် နားလည်အောင် အရင်ပညာပေး အသိပေးသင့်ပါတယ်။ ခုထိ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတာတွေကို မြင်နေရလို့ပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာချမ်းသာတဲ့ အိစုးရတွေကြည့်ပါဆိုရင်အနောက်မှာအမေရိကား၊ အာရှမှာ စင်္ကါပူ။ ဆိုတော့ – နိုင်ငံထူထောင်ရေးမှာ အခွန်အကောက်ဟာ အသက်တမျှအရေးကြီးလာပါတယ်။ ဘာတဲ့ – “အခွန်ပေးဆောင်သောနိုင်ငံကြီးသားအဖြစ်ဂုဏ်ယူပါ” ဆိုတာလေ။ အပြောကတော့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာန နဲ့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွေဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် လက်ဖျားခါရလောက်တဲ့ လူထုအော့ကျောလန်ဌာနကြီးတွေပါ။ ခုချိန်ထိလည်းအဲ့ဒီစရိုက်ကကြီးစိုးဆဲမို့၊ တာဝန်ရှိကြသူချင်းတွေတောင်လက်တို့ရတဲ့၊ ဘရတ်အုတ်ကြရတဲ့ အဖြစ်တွေပါ။ အမေရိကားမှာဆိုရင် Internal Revenue Services (IRS) ကို မြန်မာနိုင်ငံကထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့လိုကြောက်ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီဌာနကြီးကအရေးယူလာပြီဆိုရင် အဖေမကယ်နိုင်အမေမကယ်နိုင်ဘ၀ရောက်ကြရပါတယ်။
ကြားရသလောက် ၀န်ကြီးဌာနအသီးသီးတွေကိုနောက်နှစ်ဆန်းပိုင်းနောက်ဆုံးထားပြီး website တွေတင်ဘို့ ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ကြားမိသလားဘဲ။ အဲ့ဒီ website တွေမှာ လူထုက အဆင်သင့်information နဲ့ အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေ ထင်သာမြင်သာ နားလည်လွယ်အောင်ရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်ဘို့လိုပါတယ်။ လူထုအတွက် နားမလည်တာတွေကို မေးခွန်းဖြေကြားပေးမဲ့ one-stop စခန်းလေးတွေဖွင့်ထားလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ရပါတယ်။
လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့မှာ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့အခွန်ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာ ဒုတိယ၀န်ကြီးအဆင့်အသစ်ကြပ်ကြွပ်ရယူထားသူတွေဟာ အခွန်လောကသန့်စင်ရေးမှာ တချိန်က vocal ဖြစ်ခဲ့သူတွေမို့၊ သူတိုရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုကြည့်ရအောင်။
ဦးသန်းရွှေကြီးက ကြားက ရင်ထုမနာဖြစ်နေမလားမသိဘူးနော် အင်းငါ့အလှည့်တုန်းက
ကျဘယ်သူမှဆေးဖော်ကြောဖက်မလုပ် ဘယ်သူမှမလာကြဘူး အခုသူတို့အလှည့်ကျ
အလျှိုအလျှိုလာလိုက်ကြတာ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် အင်း ၀မ်းနည်းလို့မဆုံး
ရိုမီရို နောက်ဆုံးသောက်သွားခဲ့တဲ့ ဆေးလေးကိုသောင့်သင့်တာဗျ
ခုနှစ်ရက်သားသမီးအပေါင်း ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသားပါစေ
. . . . . . . . . များမပါ
2015 ရွေးကောက်ပွဲတွက် ဥပဒေအချို့ကို ပြင်ရမယ်လို့ ခုကတည်းက သတိပေးဘာဒယ်
နိုင်ငံခြားမှာ မိသားစုရှိရင် သံမဒ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုဒဲ့
ဥပဒေဂျီးကျိပီး ခုထိ သံသယပေါင်းမြောက်များစွာ နည်းနည်းဖြစ်နေပါသေးတယ်
“နိုင်ငံခြား” ဆိုတဲ့ဝေါဟာရနဲ့မယဉ်ပါးသေးတဲ့မြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ နတ်ကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်။ ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ်ဖြေရှင်းရမဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးတဲ့စာ၊ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားနဲ့ ကိုယ့်ပြန်ချုပ်ကိုင်လျက်သားဖြစ်နေပြီလေ။
အခြေခံအကျဆုံးပြင်ရမဲ့ကိစ္စကတော့ “ငါ”ဆိုတဲ့ အတ္တကိုဖြုတ်ကြဘို့ပါဘဲ။ London က Cambridge မှာ Harry လို့နံမယ်ထင်ပေါ်ခဲ့တဲ့ လီကွမ်းယူ တယောက်တောင် သူ့နိုင်ငံပြန်ပြီး၊ နိုင်ငံကိုထူထောင်သူအဖြစ်သမိုင်းမှာထင်ရှားနိုင်ရင်၊ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုတယောက်က (၂၀၁၅) ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥက္ကဌ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ…..။
“” အားလုံးကို တန်းတူညီမျှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေချင်တာပါ။ “”
BUT even in here, mandalaygazette, I can’t read some posts and can’t make comments.
So, what I learned is ” EVERYBODY WANT THE TRUE FOR HIM/HER BUT THEY NEVER GIVE THE TRUE FOR THE OTHER PERSON IF THEY THINK THE TRUE WILL HARM. “
MG is actuallyagreat blog! It doesn’t matter who you are and where you come from. We encourage high diversity putting their thoughts and sharing our wills. One’s comment could prevail if he or she can express own wish. We want to hear how readers present and will resonate. That’s how we build the concept of mutual respect, transparency, humor and knowledge; and they keep growing!
ဆရာမောင်မိုးညိုရဲ့ ဆောင်းပါးကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ်။
ဆရာတို့လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ စာတွေကြောင့် မန်းဂေဇက် ဂုဏ်တက်ရတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ဒီလိုစာတွေ ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေလို့ ကျမတို့အနေနဲ့ ဒီရွာကို စွဲစွဲမြဲမြဲချစ်ခင်နေမိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်အမြင် ကိုယ်ပြောရင်တော့ မန်းဂေဇက်ဟာ အဆင့်ရှိတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပါ။
မန်ဘာတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မသိမကျွမ်းကြပေမယ့်…
ရိုင်းစိုင်းတဲ့ နိမ့်ကျတဲ့ အပြောအဆို အပြုအမူတွေကတော့ ရှောင်ကြဉ်ကြတာ များပါတယ်။
သဂျီးပြောသလို ဦးဏှောက်မုန်တိုင်းဆင်တာတွေ ငြင်းခုန်ခြင်း အနုပညာတွေတော့ အားကောင်းသပေါ့။
ဒါဟာလည်း ဒီရွာရဲ့ အလှတပါးလို့ ပြောနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
`မတူကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ အားနည်းချက်အဖြစ် မမြင်ဘဲ ခွန်အားအဖြစ် ကိုင်စွဲနိုင်တယ်။´
ရေးသူတွေကရေးနိုင်ကြသလောက်ဖတ်ကြသူတွေကလည်း မခေပါဘူးနော်။ ဒီဆိုက်ထဲဝင်ဖတ်ပြီး၊ စာမရိုက်တတ်လို့မရိုက်ကြသူတွေ ရှိသလို၊ ဒီလိုဝင်ပြီးကွန်မင့်ပေးလို့မဖြစ်ကြတဲ့အနေအထားမှာ ရှိကြသူတွေလည်းပါသပေါ့။ စာဖတ်ပရိဿတ်ကိုလည်းလေးစားခြင်းဟာ MG ရဲ့လေးနက်တဲ့ဂုဏ်တရပ်ဖြစ်နေဘို့က ပိုလို့တောင်အရေးကြီးသေးရဲ့မဟုတ်လား။
ကဲ..ဗျိုး…အညာသားငပိန်းကတော့ ဘာမှ့ မသိ့လို့ ဝင်မေးပါရစေဗျာ.ဒီမိုကရေစီတွေ တိုးတက်ရေးလမ်းစတွေ အိုဘားမားတွေ ကိုကိုဘားမားတွေ အသာထားဗျာ.လောလောဆယ် ကျနော်တို့မြန်မာပြည်မှာ..(သမ္မတနဲ့စစ်တပ် ဘယ်သူကဘယ်သူ့ကို စစ်တပ်နဲ့သမ္မတ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို)..ပေါ့ဗျာ.တိုင်းပြည်တိုးတက်တာတွေ မှုဝါဒ ပြောင်းတာတွေ မျှော်နေကြတယ်ပေါ့ အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာ သက်သေပြရမှာက အိမ်ကြက်ချင်း သတ်နေကြတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်တွေကို အရင်ရပ်သင့်တယ်မဟုတ်လား တိုးတက်ဦးမှာပါဗျာ (မြန်မာပြည်တော့မဟုတ်ဘူး စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ အိမ်နီးခြင်း နှိုင်ငံတွေမှာ )
ကိုအညာသားရေ…နိုင်ငံတကာမှာစာရင်းပေါက်နေကြတဲ့ နိုင်ငံတကာရောက် ရွှေပြောင်း ဒုက္ခသည်စာရင်းပေါက်ကိုလေ့လာကြည့်ရင် မြန်မာကဗိုလ်စွဲနေတာ..ယုံကြပါဗျာတို့။ ဒါတွေအတွက် သမ္မတရဲ့အတွင်းစည်းဝိုင်း ကက်ဘိနက်ဝင်တွေကဦးစားပေးလုပ်နေကြမယ်ထင်ပါရဲ့။
အိမ်ကြက်ချင်းသတ်နေကြတဲ့ကိစ္စ..ရပ်တန်းကရပ်ကြဘို့ပြောကြဆိုကြရင်းငြင်းတဲ့ခုန်တဲ့ဘ၀ရောက်ကုန်ကြလို့၊ သမ္မတက လက်တို့ပြီးတမျိုး။ ဗြောင်တဖုံသတိပေးရတာတွေလည်းမမြင်ချင်ရအဆုံးဖြစ်နေပါပေ့ါ။
industrial peace ရှိမှ productive force ကတက်နိုင်မယ်လေ။ ဒါ rule of thumb ဘဲ။
အဓိကကတော့..ကျနော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးကို အသက်သွင်းဖို့နဲ့ဒေါ်စုရဲ့ မြန်မာပြည်အနာဂါတ်လူငယ်တွေအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ပညာရေးကို ဦးစားပေးဖေါ်ဆောင်ဖို့ အလျှင်အမြန်နဲ့ရောက်ရှိလာခြင်းပါပဲ…နောက်…ဒေါ်စုလို ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူမျိုးကို ဘယ်လောက်လေးစားဂုဏ်ယူပါသလဲဆိုတာပြသလိုက်ခြင်းပါပဲလို့ ယူဆမိပါတယ်..
မောင်သုညဆိုလို့ဘဲဗျာ….။ ခင်းပြသွားတဲ့ အချက်က ဒေါ်စုရဲ့ အမျှော်အမြင်ကြီးမားပုံကိုမီးမောင်းထိုးပေးလိုက်သလိုပါဘဲ။
အဲ – တခုတော့ရှိတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့တပါတ်လောက် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတခုမှာ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နဲ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီမြှင့်တင်ရေး အဆိုအတည်ပြုချက်ကိုရအောင်ယူလိုက်ရတာက၊ စကားအဖြစ်အဆိုတင်လိုက်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်တန်ရာပါဘူး။ နိုင်ငံတကာလှည့် ပြီးဒိပ်ဒိပ်ကျဲ institution တွေရဲ့ အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေနဲ့ စကားပြောဆိုစည်းဝါးရိုက်ပြီးမှ တင်တဲ့အဆိုလို့ယူဆရကြောင်းပါ။ ပေးမဲ့သူတွေကအဆင်သင့်၊ လက်ခံမဲ့သူတွေက အင်တင်တင် လုပ်လို့ရတဲ့အချိန်မဟုတ်တော့်ဘူးလေ။